Waqtiga boostada: Sep-29-2020
1. Taariikhda asalka gacmo gashi la tuuro 1889kii, labada gacmood ee ugu horeeya ee gacmo gashi la tuuro wuxuu ku dhashay rugta caafimaadka ee Dr. William Stewart Halstead. Geedi socodka qalliinka, galoofyada la tuuri karo ma xaqiijin karto oo keliya dabacsanaanta gacanta dhakhtarka, laakiin sidoo kale si weyn ayaa loo ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo isticmaalaa lanjetyada dhiigga loo yaqaan Press Press? Hadda maalmahanba dad aad iyo aad ayaa fiiro gaar ah u leh caafimaadkooda waxayna aadaan xarunta caafimaadka si caafimaadkooda looga siiyo iskaan buuxa. Sababtaas awgeed baahida loo qabo cirbadda dhiigga ayaa 3 jeer ka badan sidii hore. Sidee loo isticmaalaa marinka dhiigga ee fangaska dhiigga ayaa noqday ...Akhri wax dheeraad ah »
ORIENTMED ayaa furtay degelkeeda cusub ee offical
Bishii Sebtember 15-keedii, 'ORIENTMED' waxay ka shaqeynaysay boggeeda cusub. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka kooban "ORIENTMED" waa sida soo socota: 1. Cirbadaha la tuuro, irbadda hypodermic, faleebada la dhigo, xididka xididdada madaxa, IV Cannula, qalabka dhiigga lagu shubo, maqaarka maqaarka, tubbada dhiigga ee faakiyuumka lagu qaado, bacaha dhiigga, bacda kaadida 2. Gacmo gashi la tuuro, sida l ...Akhri wax dheeraad ah »